Waxbarashada Dugsiga Dhexe | Dugsiga Dhexe - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Waxbarashada Dugsiga Dhexe
Taageerida barashadeena dhexe
Waan ognahay ardaydeena dugsiga dhexe inay leeyihiin baahiyo aad u gaar ah. Haddii ay nala baranayaan iskuulka ama guryahooda, macallimiinteennu waxay diiradda saarayaan dhismaha bulshada iyo inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ardayda. Kaliya ma baranayno ardaydeena maadooyinka sida xisaabta ama akhriska, waxaan ka caawinaynaa inay koraan, horumariyaan oo ay dhex wareegaan adduunka ku xeeran.
Soo Celinta Dugsiga Dhexe
Ka dib markii la cusbooneysiiyay Qorshaha Waxbarashada Badbaadada ee gobolka, dugsiga dhexe ee "On the Dial" ardaydu waxay ku laaban doonaan dhismayaashayada si ay shakhsi ahaan wax u bartaan. Ardaydu waxay ku soo laaban doonaan dugsiga Isniinta ilaa Khamiista waxayna sii wadan doonaan inay wax ka bartaan guriga jimcaha inta ka harsan sanad dugsiyeedka.
Maarso 1: Dhammaan ardayda fasalka 6-8 waxay ku noqdaan dugsiga
Maxaan kaa caawin karnaa inaad u hesho ardayda Dugsiga Dhexe?
Jadwalka maalinlaha ah ee ardayda Dugsiga Dhexe ee Oak-Land
Jadwal maalinle ah oo loogu talagalay ardayda dhigata Dugsiga Dhexe ee Stillwater
Akhris bilaash ah iyo umeerin xagga xisaabta ah oo ka timaada Xulufada Aqoonyahanada
Aynu wajahno. COVID-19 waxay ka dhigtay wax walba caqabado sannadkan, gaar ahaan barashada. Akhriska Corps iyo Xisaabta ayaa bilaabay qorshe cusub oo lagu caawinayo!